Ababulali bokhula Archives - US Right to Know
Posted on Mashi 1, 2021 by UStacy Malkan
Incwadi entsha yoMqondisi Wezocwaningo wase-USRTK uCarey Gillam iphumile manje futhi iqoqa izibuyekezo ezikhanyayo. Nayi incazelo emfushane yencwadi evela kumshicileli Isiqhingi Press:
U-Lee Johnson wayeyindoda enamaphupho alula. Konke ayekufuna kwakuwumsebenzi ozinzile kanye nekhaya elihle lomkakhe nezingane, okungcono kunempilo enzima ayaziyo esakhula. Wayengakaze acabange ukuthi angaba ubuso bokubambana kukaDavid noGoliyathi ngokulwa nesinye sezikhondlakhondla zezinkampani ezinamandla kakhulu emhlabeni. Kodwa ingozi yasemsebenzini yashiya uLee efakwe ikhemikhali enobuthi futhi ebhekene nomdlavuza obulalayo owaguqula impilo yakhe yabhekisa phansi. Ku-2018, umhlaba ubukele njengoba uLee ebhekwe phambili kwezimpi ezisemthethweni ezinkulu kakhulu emlandweni wakamuva.
Amaphepha eMonsanto yindaba yangaphakathi yecala elibalulekile likaLee Johnson elibhekene neMonsanto. KuLee, leli cala lalingumjaho ophikisana newashi, nodokotela babikezela ukuthi ngeke aphile isikhathi eside ngokwanele ukuthi angathatha ukuma kofakazi. Eqenjini le-eclectic labammeli abancane, abanesifiso sokumela, bekuyindaba yokuziqhenya kobungcweti nokuzibeka engcupheni komuntu siqu, nezigidi zamadola abo kanye nodumo olutholwe kanzima kulayini.
Ngamandla okulandisa athintekayo, Amaphepha eMonsanto ithatha abafundi ekusithekeni kwempi yomthetho ekhathazayo, ibuyisa ikhethini ebuthakathakeni bohlelo lwenkantolo yaseMelika nobude abameli abazoya kulo ukulwa nobubi bezinkampani futhi bathole ubulungiswa kubathengi.
Bona okuningi mayelana ne- bhuka lapha. Thenga incwadi ku Amazon, Barnes & Noble, umshicileli Isiqhingi Press noma abathengisi bezincwadi abazimele.
“Indaba enamandla, ixoxwa kahle, nomsebenzi omuhle wobuntatheli bokuphenya. UCarey Gillam ubhale incwadi ephoqelelayo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, mayelana nezimpi zomthetho ezibaluleke kakhulu esikhathini sethu. ” - Lukas Reiter, umkhiqizi omkhulu we-TV nomlobi we "The Blacklist," "The Practice," ne "Boston Legal"
“Amaphepha eMonsanto ahlanganisa isayensi nenhlekelele yabantu nedrama yasenkantolo ngesitayela sikaJohn Grisham. Kuyindaba yokukhohlakala kwezinkampani ngezinga elikhulu - isambulo esethusayo sokuhaha komkhakha wamakhemikhali, ukuzikhukhumeza, nokunganaki impilo yabantu nempilo yeplanethi yethu. Kumele kufundwe. ” - UPhilip J. Landrigan, MD, uMqondisi, uHlelo Lwezempilo Yomphakathi Lomhlaba Wonke kanye neCommon Good, iBoston College
"Intatheli emnkantshubomvu ephenya uCarey Gillam utshela udaba lukaJohnson encwadini yakhe yakamuva ethi," The Monsanto Papers, "i-akhawunti esheshayo, ethintekayo yokuthi ingcebo yeMonsanto neBayer yashintsha kanjani kakhulu esikhathini esifushane kangaka. Ngaphandle kodaba oludingidwayo - isayensi nenkambiso yomthetho eyinkimbinkimbi - "Amaphepha eMonsanto" ukufundwa okuhlabahlosile okunikeza incazelo ekulula ukuyilandela yokuthi lamacala aqhubeka kanjani, amajaji afinyelela kanjani esinqumweni sawo nokuthi kungani iBayer ibonakala ngathi, empeleni , ngiphakamisa ifulegi elimhlophe manje. ” - St Louis Post-Dispatch
“Umbhali wakha icala eligculisayo lokuthi iMonsanto ibikuthanda kakhulu ukuvikela isithunzi senkomo yayo engukheshi kunokulalela ubufakazi besayensi ngezinto zayo eziyingozi. UGillam ulunge kakhulu ekunikezeni izinto eziyinkimbinkimbi zobuntu obusemthethweni, okunezela obunye ubuntu endabeni kaJohnson… Ukwehliswa okugunyaziwe kwenhlangano okusobala ukuthi ayinandaba nempilo yomphakathi. ” - UKirkus
“UGillam ulandisa ngokubalwa kwesikhashana nenkampani enkulu imikhiqizo yayo ebimakethwa njengephephile kusukela ngawo-1970. Njengokubhekwa kokukhohlakala kwezinkampani kanye nokuqondiswa komthetho ezimweni ezibucayi, incwadi kaGillam iveza isidingo sokuvikelwa nokuphepha kwabathengi. ” - Uhlu lwezincwadi
“Kufundwe kahle, kuphendulwa ikhasi. Ngangikhathazeke ngokuphelele ngenkohliso, ukuhlanekezelwa, nokuntuleka kwenkambiso yenkampani. ” - ULinda S. Birnbaum, Owabe enguMqondisi, Isikhungo Sikazwelonke Sezesayensi Yezemvelo kanye noHlelo Lukazwelonke Lwezidakamizwa, kanye neScholar eResidence, eDuke University
"Incwadi enamandla ekhanyisa iMonsanto nabanye osekuyisikhathi eside bengathintwa!"
- UJohn Boyd Jr., uMsunguli noMongameli, iNational Black Farmers Association
Intatheli ephenyayo uCarey Gillam uchithe iminyaka engaphezu kwengu-30 ebika ngeMelika yezinkampani, kubandakanya neminyaka eyi-17 esebenzela i-Reuters international agency. Incwadi yakhe yango-2017 emayelana nobungozi bezibulala-zinambuzane, iWhitewash: The Story of a Weed Killer, Cancer, and the Corruption of Science, iwine i-2018 Rachel Carson Book Award evela kwi-Society of Environmental Journalists futhi isiyingxenye yekharikhulamu kwezempilo eziningana zemvelo zaseyunivesithi. izinhlelo. UGillam njengamanje unguMqondisi Wokucwaninga weqembu labathengi elingenzi nzuzo i-US Right to Know futhi ubhala njengomnikeli we I-Guardian.
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane ezolimo, Bayer, California, umdlavuza, UCarey Gillam, izinkantolo, izifo, imvelo, EPA, ukulima, glyphosate, zezempilo, ukhula, Abameli, Monsanto, Amaphepha eMonsanto, i-non-Hodgin lymphoma, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, ababulali bokhula
Izifundo ezintsha zokubulala ukhula ziphakamisa ukukhathazeka ngempilo yokuzala
Posted on August 12, 2020 by UCarey Gillam
Njengoba iBayer AG ifuna ukwehlisa ukukhathazeka ngokuthi imithi yokubulala ukhula esuselwa eMonsanto eglyphosate ibangela umdlavuza, izifundo eziningana ezintsha ziphakamisa imibuzo mayelana nomthelela wamakhemikhali ongahle ube khona empilweni yokuzala.
Ukuhlanganiswa kwezifundo zezilwane okukhishwe kuleli hlobo kukhombisa ukuthi ukuvezwa kwe-glyphosate kunomthelela ezithweni zokuzala futhi kungasongela ukuzala, kungeze nobufakazi obusha bokuthi umenzeli wokubulala ukhula angaba ukuphazamiseka kwe-endocrine. Amakhemikhali aphazamisa i-Endocrine angalingisa noma aphazamise amahomoni omzimba futhi axhumene nezinkinga zokukhula nokuzala kanye nokungasebenzi kahle kobuchopho namasosha omzimba.
Phakathi ku iphepha elishicilelwe ngenyanga edlule in I-Endocrinology yamangqamuzana namaselula, Abaphenyi abane base-Argentina bathi izifundo ziphikisana nesiqinisekiso se-US Environmental Protection Agency (EPA) sokuthi i-glyphosate iphephile.
Ucwaningo olusha luza njengoba iBayer injalo ukuzama ukuxazulula izimangalo ezingaphezu kuka-100,000 ezilethwe e-United States ngabantu abasola ukutholakala kwe-Roundup kaMonsanto kanye neminye imikhiqizo ye-herbicide esuselwa e-glyphosate kubangele ukuthi bahlakulele i-non-Hodgkin lymphoma. Abamangali ecaleni lamacala ezweni lonke bathi iMonsanto kudala yafuna ukufihla izingozi zemithi yokubulala ukhula.
UBayer uzuze ifa le-Roundup litigation lapho uthenge iMonsanto ku-2018, ngaphambi nje kokunqoba kwecala lokuqala kwabamangali.
Izifundo zibuye futhi njengoba amaqembu abathengi esebenza ukuqonda kangcono ukuthi angakunciphisa kanjani ukuvezwa kwabo yi-glyphosate ngokudla. Ucwaningo ishicilelwe ngo-Agasti 11 ithole ukuthi ngemuva kokushintshela ekudleni okuphilayo izinsuku ezimbalwa nje, abantu bangehlisa amazinga e-glyphosate atholakala emchameni wabo ngamaphesenti angaphezu kwama-70. Ngokuphawulekayo, abacwaningi bathola ukuthi izingane ezifundweni bezinamazinga aphakeme kakhulu e-glyphosate emchameni wazo kunabantu abadala. Bobabili abadala nezingane babone amaconsi amakhulu phambi kwe-pesticide kulandela ukuguqulwa kokudla.
IGlyphosate, isithako esisebenzayo ku-Roundup, isibulali sokhula esisetshenziswa kakhulu emhlabeni. IMonsanto yethule izitshalo ezibekezelela i-glyphosate kuma-1990s ukukhuthaza abalimi ukuthi bafafaze i-glyphosate ngqo kuzo zonke izinkambu zezitshalo, babulale ukhula kepha hhayi izitshalo ezishintshwe izakhi zofuzo. Ukusetshenziswa okubanzi kwe-glyphosate, ngabalimi kanye nabaninikhaya, izinsiza kanye nezinhlangano zomphakathi, kudonse ukukhathazeka okukhulayo eminyakeni edlule ngenxa yokugcwala kwayo nokwesaba ukuthi ingahle yenzeni empilweni yabantu neyemvelo. Ikhemikhali manje selitholakala kakhulu ekudleni nasemanzini nasemchameni womuntu.
Ngokusho kososayensi base-Argentina, eminye imiphumela ebikiwe ye-glyphosate ebonwe ezifundweni ezintsha zezilwane kungenxa yokuchayeka emithamo ephezulu; kodwa kunobufakazi obusha obukhombisa ukuthi ngisho nokuvezwa komthamo ophansi nakho kungashintsha ukuthuthukiswa kwendlela yokuzala yabesifazane, kube nemiphumela ekuzaleni. Lapho izilwane zivezwa ku-glyphosate ngaphambi kokuthomba, izinguquko ziyabonakala ekukhuleni nasekuhlukaniseni ama-ovary follicles nesibeletho, ososayensi bathi. Ngokwengeziwe, ukuvezwa kwemithi yokubulala ukhula eyenziwe nge-glyphosate ngesikhathi sokukhulelwa kungashintsha ukukhula kwenzalo. Konke kunezela ukukhombisa ukuthi i-glyphosate ne-glyphosate-based herbicides yiziphazamisi ze-endocrine, abacwaningi baphetha kanjalo.
Usosayensi wezolimo uDon Huber, uprofesa osafufusa wasePurdue University, uthe ucwaningo olusha lukhulisa ulwazi mayelana nobukhulu bomonakalo ohambisana ne-glyphosate kanye ne-glyphosate-based herbicides futhi lunikeza "ukuqonda kangcono ukuqonda ubucayi bokuchayeka okukhona kuyo yonke indawo yethu isiko manje. ”
UHuber uxwayise iminyaka eminingi ukuthi i-Roundup kaMonsanto kungenzeka ibe nomthelela ezinkingeni zokuzala emfuyweni.
One ukutadisha okuphawulekayo eshicilelwe ku-inthanethi ngoJulayi kumagazini Ukudla kanye Nezokwelapha Kwezolimo, inqume ukuthi i-glyphosate noma i-glyphosate-based herbicides iphazamise "okubalulekile kwe-hormonal kanye ne-uterine target molecular" kumagundane akhulelwe adaluliwe.
Isifundo esihlukile muva nje eshicilelwe encwadini I-Toxicology ne-Applied Pharmacology ngabaphenyi base-Iowa State University babheka ukuvezwa kwe-glyphosate kumagundane. Abaphenyi baphetha ngokuthi ukuvezwa okungapheli okungapheli kwezinga eliphansi le-glyphosate "kuguqula i-ovarian proteome" (iqoqo lamaprotheni azwakalayo ohlobo oluthile lweseli noma lomzimba) futhi "ekugcineni kungathinta ukusebenza kwe-ovarian. Ephepheni elihlobene elivela kubaphenyi abafanayo be-Iowa State kanye nomlobi oyedwa owengeziwe, eshicilelwe ku I-Toxicology Yokuzala, abacwaningi bathi abatholanga imiphumela ephazamisa i-endocrine kumagundane adalulwe ku-glyphosate, noma kunjalo.
Abaphenyi abavela e-University of Georgia kubikwe kulo magazini Isayensi Yezilwane Nezilwane ukuthi ukusetshenziswa kwemfuyo okusanhlamvu okugcwele izinsalela ze-glyphosate kubonakale kuthwala ukulimala kwezilwane, ngokusho kokubuyekezwa kwezifundo ngesihloko. Ngokuya ngokubuyekezwa kwezincwadi, ama-herbicides asuselwa ku-glyphosate abonakala esebenza "njengezidakamizwa ezinobuthi zokuzala, ezinemiphumela ehlukahlukene kuzinhlelo zokuzala zabesilisa nabesifazane," kusho abacwaningi.
Imiphumela eyethusayo ibikhona futhi kubonakala ezimvwini. Ucwaningo olushicilelwe kumagazini Ukungcola kwemvelo ibheke imithelela yokuvezwa kwe-glyphosate ekukhuleni kwesibeletho kumawundlu ezinsikazi. Bathola ushintsho abathi lungathinta impilo yokuzala yezimvu futhi lukhombise ama-herbicides asuselwa e-glyphosate asebenza njengesiphazamisi se-endocrine.
Futhi kushicilelwe ku- Ukungcola kwemvelo, ososayensi baseFinland naseSpain bathi ku iphepha elisha ukuthi benze ukuhlolwa kokuqala kwesikhathi eside kwemiphumela yokuchayeka kwe- "sub-toxic" glyphosate ezinkukhu. Bazama ukudalula izigwaca zabesifazane nabesilisa emithini ye-glyphosate-based herbicides kusukela eminyakeni eyi-10 kuye emavikini angama-52.
Abaphenyi baphetha ngokuthi i-glyphosate herbicides ingakwazi "ukuguqula izindlela ezibalulekile zomzimba, isimo se-antioxidant, i-testosterone, kanye ne-microbiome" kepha ababonanga imiphumela ekukhiqizeni. Bathe imiphumela ye-glyphosate ingahle ingabonakali njalo “ngokuhlolwa kwendabuko, ikakhulukazi okwesikhashana, ikakhulukazi okunobuthi, futhi lokho kuhlola kungenzeka kungabuboni ngokugcwele ubungozi…”
Omunye izifundo ezintsha sha ukubheka imithelela ye-glyphosate kwezempilo kushicilelwe kule nyanga ku- Ijenali Yomhlaba Wonke Yocwaningo Lwezemvelo Nempilo Yomphakathi. Abaphenyi baphetha ngokuthi i-glyphosate kanye nemithi yokubulala izinambuzane i-thiacloprid ne-imidacloprid, kungenzeka kube ngabaphazamisi be-endocrine.
Ama-insecticide ayingxenye yesigaba samakhemikhali se-neonicotinoid futhi aphakathi kwemithi yokubulala izinambuzane esetshenziswa kakhulu emhlabeni.
Abaphenyi bathi babheke umphumela we-glyphosate nama-neonicotinoid amabili kuzinhloso ezimbili ezibucayi zohlelo lwe-endocrine: i-Aromatase, i-enzyme ebhekele i-estrogen biosynthesis, ne-estrogen receptor alpha, iphrotheni enkulu ekhuthaza ukusayinda kwe-estrogen.
Imiphumela yabo ibixubile. Abaphenyi bathi maqondana ne-glyphosate, umbulali wokhula uvimbela umsebenzi we-aromatase kodwa ukuvimbela "bekuyingxenye futhi kubuthakathaka." Okubalulekile ukuthi abacwaningi bathi i-glyphosate ayizange idale umsebenzi we-estrogenic. Imiphumela "ibingahambisani" nohlelo lokuhlola olwenziwe yi-US Environmental Protection Agency, oluphethe ngokuthi “abukho ubufakazi obukholisayo bokusebenzisana okungaba khona nendlela ye-estrogen ye-glyphosate,” kusho bona.
Abaphenyi babone umsebenzi we-estrogenic nge-imidacloprid ne-thiacloprid, kepha ekugxilweni okuphezulu kunamazinga okubulala izinambuzane alinganiswa kumasampula womuntu. Abaphenyi baphetha ngokuthi “imithamo ephansi yalezi zinambuzane akumele ibhekwe njengengozi,” kodwa, ngoba le mibulala-zinambuzane, kanye namanye amakhemikhali aphazamisa i-endocrine, “kungadala umphumela we-estrogenic.”
Okutholakele okuhlukahlukene kuza njengoba amazwe amaningi nezindawo emhlabeni wonke zihlola ukuthi kufanele kukhawulwe noma kuvinjelwe ukusetshenziswa okuqhubekayo kwe-glyphosate herbicides.
Inkantolo yokudlulisa amacala eCalifornia ubuse ngenyanga edlule ukuthi kunobufakazi "obuningi" bokuthi i-glyphosate, kanye nezinye izithako kumikhiqizo ye-Roundup, idale umdlavuza.
Ukudla Okucatshangwayo izilwane, babies, Bayer, umdlavuza, izingane, imvelo, ukulima, ukuzala, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, zezokwelapha, Monsanto, izibulala-zinambuzane, ukukhulelwa, Ukukhiqiza, RoundUp, isayensi, ababulali bokhula
Amaqembu ama-Big Ag athi inkantolo ayikwazi ukutshela i-EPA ukuthi kufanele ivimbele nini i-dicamba
Posted on June 17, 2020 by UCarey Gillam
Abahlukumezi abasindayo kunabo bonke batshele inkantolo yombuso ukuthi akufanele izame ukuvimba abalimi bakakotini nabasoya beGMO ekusebenziseni ababulali bokhula be-dicamba ngokungekho emthethweni ekupheleni kukaJulayi, yize inkantolo yakhipha umyalelo wokuthi kuvinjelwe ngokushesha.
Izinhlangano eziyisithupha zezentengiselwano zikazwelonke, zonke ezinokuxhumana okudala kwezezimali eMonsanto nakwezinye izinkampani ezithengisa imikhiqizo ye-dicamba okukhulunywa ngayo, zifake isikhalazo ngoLwesithathu eNkantolo Yezokudlulisa Amacala yaseMelika ngeSekethe Lesishiyagalolunye linxusa inkantolo ukuthi ingazami ukugxambukela. ngesimemezelo se-Environmental Protection Agency (EPA) sokuthi abalimi bangaqhubeka nokusebenzisa imikhiqizo ye-dicamba ngoJulayi 31.
Bacele nenkantolo ukuthi ingayibukeli phansi i-EPA njengoba kuceliwe ngamaqembu awine i- Juni 3 umyalelo wenkantolo ekhipha ukuvinjelwa.
"Abalimi baseMelika bakabhontshisi nabokotini bangaba sengozini enkulu yezezimali uma bevinjelwa ukusebenzisa i-Dicamba Products kule nkathi yokukhula," kusho umbiko omfushane owenziwe yi-American Farm Bureau Federation, i-American Soybean Association, iNational Cotton Council of America, iNational Association of Wheat Growers, National I-Corn Growers Association, nabakhiqizi be-National Sorghum.
Ngokwehlukana, iCropLife America, i-lobbyist enethonya embonini yezolimo, wafaka isikhashana ithi ifuna ukunikeza "Ulwazi Olusizo eNkantolo." AbakwaCropLife basho lokhu kufayela ukuthi inkantolo ayinalo igunya lokuthi i-EPA iqhubeka kanjani nokusula ukusetshenziswa kwemikhiqizo yokubulala izinambuzane njengababulali bokhula i-dicamba.
Le minyakazo ingeyakamuva ezimweni eziningi ezalandela isinqumo seSekethe Yesishiyagalolunye, esathola ukuthi i-EPA yephule umthetho ngesikhathi ivuma imikhiqizo ye-dicamba eyenziwe nguMonsanto - ephethwe yiBayer AG, kanye nemikhiqizo edayiswa yiBASF, kanye IDuPont, ephethwe yiCorteva Inc.
Inkantolo ikhiphe umyalelo wokuthi kuvinjelwe ukusetshenziswa komkhiqizo ngamunye walezi zinkampani, ithole ukuthi i-EPA “ibubeka phansi kakhulu ubungozi” bayo leyo mikhiqizo kubalimi abatshala izilimo ngaphandle kokotini nobhontshisi obenziwe ngezakhi zofuzo.
I-EPA ibonakale iliphika i-oda, kepha, lapho utshele abalimi bakakotini nabasoya bangaqhubeka nokufafaza ukubulala ukhula okukhulunywa ngako ngoJulayi 31.
ICentre for Food Safety (CFS) namanye amaqembu abekade beyise i-EPA enkantolo ngalolu daba babuyele enkantolo ngesonto eledlule, bafuna ukuthi i-9 Circuit bamba i-EPA ngokwedelela. Inkantolo manje isicubungula leso siphakamiso.
"I-EPA nezinkampani ezibulala izibulala-zinambuzane zizamile ukudida lolu daba nokuzama ukwesabisa iNkantolo," kusho uGeorge Kimbrell, umqondisi wezomthetho we-CFS nommeli walaba bafaka izicelo. "INkantolo ibambe ukuthi lo mkhiqizo usebenzisa okungekho emthethweni kanti ubuqili be-EPA abunakukushintsha lokho."
Umyalo wokuvinjelwa kwemikhiqizo yenkampani i-dicamba ubangele isiyaluyalu ezweni lasepulazini ngoba abalimi abaningi besoya kanye nokotini batshale izigidi zamahektare ezitshalo ezibekezelela izakhi ze-dicamba ezakhiwe nguMonsanto ngenhloso yokwelapha ukhula kulezo zinsimu ngemithi yokubulala ukhula i-dicamba eyenziwe izinkampani ezintathu. Izitshalo zibekezelela i-dicamba ngenkathi ukhula lufa.
Amaqembu okwamukela izivakashi epulazini athi ngamafuphi awo ukuthi ama-acre angama-64 million atshalwe nembewu ebekezelela i-dicamba kule sizini. Bathe uma labo balimi bengakwazi ukufafaza amasimu abo ngemikhiqizo ye-dicamba bazoba “ngokuvikeleka kakhulu kukhula olumelana neminye imithi yokubulala ukhula, okubanga
imiphumela ebalulekile yezimali evela ekulahlekelweni komkhiqizo. ”
Ngaphezulu kwamahektare ayisigidi ezitshalo ezingakhiqizwanga izakhi zofuzo ukubekezelela i-dicamba kwabikwa ukuthi zalimala ngonyaka odlule ezifundazweni eziyi-18, kusho inkantolo yombuso kulesi sinqumo.
"Inhloso ye-EPA ukuvikela impilo yabantu kanye nemvelo…" kusho umongameli webhodi leNational Family Farm Coalition uJim Goodman. "Ukwedelela kwabo lo msebenzi bekungeke kuvezwe ngokucacile kunokunganaki kwabo okusobala isinqumo seNkantolo Yesishiyagalolunye Yesekethe Yokwedlulisa Amacala sokumisa izicelo eziphezulu kakhulu zedicamba ngokushesha ukuvimbela izigidi zamahektare ezitshalo zabalimi ukuba zingabhujiswa."
NgoFebhuwari, a Ijaji laseMissouri liyalile IBayer neBASF bakhokhele umlimi wamapentshisi amadola ayizigidi eziyi-15 kumonakalo wokunxephezela kanye namaRandi ayizigidi ezingama-250 kumonakalo wokujezisa ngomonakalo we-dicamba ezingadini zomlimi. Ijaji liphethe ngokuthi iMonsanto neBASF bakha uzungu ezenzweni ababazi ukuthi zizoholela ekulimaleni kwezitshalo okubanzi ngoba babelindele ukuthi kuzonyusa inzuzo yabo
I-Monsanto Roundup Trial Tracker, Ukukhangisa Isifunda se-9, BASF, Bayer, Isikhungo Sokuhlukahluka Kwezinto Eziphilayo, Isikhungo Sokuphepha Kokudla, Corteva, cotton, izinkantolo, I-Dicamba, Dupont, Engenia, EPA, epulazini, Fexapan, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, Monsanto, isayensi, ubhontshisi, ababulali bokhula, ukhula, I-Xtend